Miyir-qabka Caqli ahaan
Ku Raadi Digtoonaanta iyada oo loo marayo qorayaasha aqoonta
AQOONSIGA AAD U BAAHAN YAHAY TARSANKA.
Vol. 6 Maya 3
Vol. 6 Maya 4 - II.
Vol. 6 Maya 5 - III.
Vol. 6 Maya 6 - IV.
Vol. 7 Maya 1 - V.
Vol. 7 Maya 2 - VI.
Saddex adduunyo oo ku wareegsan, ayaa geli kara oo dhali kara adduunkan muuqaalka ah, kaas oo ah kan ugu hooseeya, iyo seddexda seddexaad.
Qodobkaani wuxuu isku deyi doonaa inuu muujiyo waxa maskaxdu tahay iyo xiriirkiisa jirka jirka. Waxay farta ku fiiqi doontaa xiriirka dhaw ee maanka adduunyada dhexdeena iyo tan inaga dhexeysa, waxay muujineysaa oo ay muujineysaa jiritaanka dhabta ah ee aqoonta aan caadiga aheyn ee dunida, waxay muujineysaa sida maanka uu maskax ahaan ugu ku noolaan karo, iyo sida, iyadoo aqoonta, uu qofku u noqon karo miyir qaba.
Dad badan ayaa oran doona inuu ogaa inuu jir leeyahay, inuu leeyahay nolol, rabitaanno, dareemo, iyo inuu leeyahay maskax waxna ku adeegsado oo uu ku fikiro; laakiin haddii la waydiiyo waxa jidhkiisu run ahaan yahay, waxa noloshiisu tahay, waxa uu yahay iyo waxa uu yahay, waxa fikirkiisu yahay, waxa maskaxdiisu tahay, iyo waxa socodsiiya howlaheedu markay yihiin, wuxuu ku kalsoonaan doonaa jawaabahiisa, sida inbadan ay diyaar u yihiin inay caddeeyaan inay yaqaanaan qof, meel, shay ama mowduuc, laakiin haddii ay tahay inay sheegaan waxay ka ogyihiin iyaga iyo sida ay u yaqaanaan, way ku sii yaraan doonaan caddayntooda. Haddii nin u baahan yahay inuu sharraxo waxa dunidu ku jirto qaybaha ay ka kooban tahay iyo guud ahaanba, sida iyo sababta ay dhulku u soo saarto flora iyo fauna, waxa sababa durduradda badda, dabaysha, dabka iyo xoogagga uu dhulku ku shaqeeyo. hawlgallada, waxa sababa qaybinta jinsiiyada aadanaha, sara u kaca iyo dhicitaanka ilbaxnimada, iyo waxa sababa in ninku fikir yeesho, ka dib markaa waa mid taagan, haddii markii ugu horreysay maskaxdiisa loo jeediyo su'aalahaas oo kale.
Ninkii xayawaanku dunida ayuu yimaadaa; Xaaladaha iyo jawigu waxay qorayaan qaab nololeedkiisa. In kasta oo uu yahay ninka xayawaanka, waxa uu ku qanacsan yahay in uu la qabsado sida ugu fudud qaab farxad-ku-nasiib leh. Ilaa iyo inta uu doonayo inuu ku qanco, wuxuu qaadaa waxyaalaha uu arko isaga oo aan wax su'aalo ah laga weydiinin sababihiisa, wuxuuna ku nool yahay nolol xayawaan caadi ah oo faraxsan. Waxaa jira waqti in isbeddelkiisii ​​marka uu bilaabo inuu la yaabanaado. Wuxuu ka yaabiyaa buuraha, cidhifyada, guuxyada badda, Wuxuu la yaaban yahay dabka iyo xooggiisa wax ku baabbi'iya, Oo wuxuu ka yaabiyaa duufaanka, dabaysha, onkodka, hillaaca, iyo waxyaalaha dagaalku ku yaal. Wuxuu fiiriyaa oo la yaabiyaa xilliyada isbeddelka, dhirta sii kordheysa, midabaynta ubaxa, wuxuu la yaaban yahay xiddiguhuna way u jeedaan, dayaxa iyo wejigiisa isbeddela, oo kolba qorraxda ayuu ku aruuraa oo wuu u riyaaqayaa sida bixiya. iftiin iyo nolol.
Awoodda la yaabka leh ayaa isaga beddesho xayawaan illaa qof, maxaa yeelay yaab waa astaantii ugu horreysay ee maskaxda soo jeedisa; laakiin maskaxda ma aha inay had iyo goor yaaban. Marxaladda labaad ayaa ah iskudayada in la fahmo oo la isticmaalo sheyga yaabka leh. Markuu xayawaanku gaadhay marxaladan koritaanka, wuxuu daawaday qorrax soo kacaya iyo xilliyada isbeddelaya, wuxuuna calaamadiyay horumarka waqtiga. Qaababka uu u ku fiirinayay, wuxuu bartay sida loo isticmaalo xilliyada iyadoo loo eegayo dib u soo noqoshadooda baaskiil, oo waxaa laga caawiyay dadaalkiisa si uu u ogaado kuwa bini-aadamka ah, ee aan la soo koobi karin, ka soo gudbay dugsiga uu markaas galayay. Si saxda ah loogu xukumo ifafaalaha soo noqnoqda ee dabeecadda, tani waa waxa ay ragga maanta ugu yeeraan aqoonta. Aqoontooda ayaa ah waxyaabaha iyo dhacdooyinka sida lagu muujiyey loona fahmay iyada oo loo eegayo iyo marka loo eego dareenka.
Waxay ku qaadatay da’da maskaxdu inay dhisto oo ay kobciso dareenka isla markaana ay ku kasbato aqoon adduunyada jireed iyada; laakiin helitaanka aqoonta adduunka maskaxdu way lumisay aqoonta nafteeda, maxaa yeelay shaqooyinkeeda iyo awooddeeda ayaa loo tababaray oo la waafajiyay iyo iyada oo la dareemayo in aanu awood u yeelan karin in la arko wax kasta oo aan soo gaarin ama rafcaan u ah dareenka. .
Si loo helo aqoonta dhabta ah, maanka caadiga ahi wuxuu ku taagan yahay isla xiriir la mid ah kii maanka nin xayawaanka ah u lahaa dunida wakhtigiisii. Dadku maanta waa baraarugsan yihiin suurta galnimada dunida gudeheeda sida xayawaanku xayawaanku ugu toosay kuwa dunida jir ahaana. Intii lagu jiray qarnigii la soo dhaafay, maskaxda aadanaha waxay soo martay wareegyo badan iyo marxalado horumarineed. Ninku wuxuu ku qancay inuu dhasho, oo la nuugo, inuu neefsado, wax cuno oo wax cabbo, ganacsi yeesho, guursado oo uu dhinto, isagoo rajadii jannada leh, laakiin hadda isagu ma ahan mid lagu qanco. Waxyaalahaas oo dhan wuu u sameeyaa sidii uu hore u sameeyay oo wuu ku sii socon doonaa ilbaxnimada weli inuu yimaado, laakiin maskaxda aadanaha ayaa ku jirta xaalad lagu toosinayo wax kale oo aan ahayn arrimaha bani-aadamka ee nolosha. Maskaxda ayaa dhaqdhaqaaqa oo kacda xaalad kacsanaan leh oo u baahan wax ka baxsan xadka suurtagalnimada deg degga ah. Baahidan ayaa ah caddeyn inay suurtogal u tahay maanka inuu sameeyo oo wax ka ogaado wixii uu yaqaanay. Ninku wuxuu isweydiiyaa cidda uu yahay iyo waxa uu yahay.
Isaga oo ku hela xaalado gaar ah, ku soo koraya oo ku bartay sida uu doonayo, ganacsigu wuu galayaa, laakiin haddii uu ku sii socdo meheradda wuxuu ogaanayaa in ganacsigu aanu qancin doonin si kastaba ha ahaatee waa laga yaabaa inuu ku guuleysto. Wuxuu dalbadaa guul dheeri ah, wuu helayaa, welina kuma qanacsana. Wuxuu dalban karaa bulshada iyo himilooyinka, raaxada, himilada iyo gaaritaanka nolosha bulshada, wuuna dalban karaa oo wuxuu gaari karaa booska iyo awoodda, laakiin weli kuma qanacsana. Cilmi baarista sayniska waxay ku qanacdaa in muddo ah maxaa yeelay waxay ka jawaabtaa weydiimaha maskaxda ee ku saabsan muuqaalka ifafaale iyo qaar ka mid ah sharciyada degdegga ah ee xakameeya ifafaalaha. Maskaxda ayaa markaa oran karta inay ogtahay, laakiin markay raadiso inay ogaato sababaha ifafaale, markale kuma qanacsana. Farshaxanku wuxuu ka caawiyaa maskaxda maskaxdeeda inay ku wareegaan dabiiciga, laakiin waxay ku dhamaataa qanacsanaanta maskaxda maxaa yeelay hadba sida ugu quruxda badan ee ugu fiican, waxaa yaraanaya in loo muujiyo dareenka. Diimaha ayaa ah meelaha ugu yar ee aqoonta lagu qanco, waayo in kasta oo dulucdu ay macaan tahay, haddana waxaa hoos u dhigay tarjumaad xagga dareenka ah, iyo in kastoo wakiilada diintu ay ka hadlayaan diintooda inay ka sarreeyaan dareenka, hadana waxay ka soo horjeedaan sheegashadooda xagga fiqiga. Kuwaasoo lagu soo koobay habka, iyo dareenka. Meel kasta oo uu qofku joogo iyo xaalad kasta oo uu ku sugan yahay, kama baxsan karo isla weydiimahaas: Maxuu ula jeedaa — xanuun, raaxo, guul, dhib, saaxiibtinimo, nacayb, jacayl, xanaaq, damac; jahwareerka, jahliga, damacyada, himilooyinka, rajooyinka? Waxaa laga yaabaa inuu guul ku gaadhay ganacsiga, waxbarashadda, jagada, wuxuu lahaan karaa waxbarasho weyn, laakiin haddii uu isweydiiyo waxa uu ka og yahay wixii uu soo bartay, jawaabtiisu waa mid aan ku qanacsanayn. In kasta oo laga yaabo inuu aqoon weyn u leeyahay adduunka, wuxuu ogyahay inuusan garaneyn wuxuu markii hore ku fikiray inuu yaqaan. Isaga oo la yaaban waxa ay taasi macnaheedu tahay, wuxuu muujiyaa suurtagalnimada soo gelitaankiisa xaqiijinta adduun kale oo dunida gudahiisa ah. Laakiin hawshu way ku adkaatay isaga oo aan aqoon sida loo bilaabo. Baahan looma sii yaabin karo maxaa yeelay gelitaanka aduun cusub waxay ubaahantahay hormarinta awoodaha oo aduunka cusub lagu fahmi karo. Haddii awoodahaas la horumarin lahaa, dunidu hore ayaa loo yiqiin lahaa, oo ayan ahayn wax cusub. Laakiin madaama ay cusub tahay iyo kulliyadaha lagama maarmaanka u ah jiritaanka nolosha cusub ee adduunku ay yihiin habka keliya ee lagu garan karo adduunka cusub, waa inuu horumariyaa awoodahaas. Taas waxaa lagu sameeyaa dadaal iyo isku day in la isticmaalo kulliyadaha. Maaddaama maskaxdu bartay inay ogaato adduunka jir ahaaneed, sidoo kale waa inay tahay, maanka, bartaa inay ogaato jirkeeda jir ahaaneed, sameyso jirka, nolosha, iyo mabaadi'da rabitaankeeda, sida mabaadi'da kala duwan, iyo sida ay uga duwan tahay lafteeda. Isku dayga inaad barato waxa jirka jirku yahay, maskaxda ayaa si dabiici ah uga soocaysa jirka jirkeeda waxayna markaa si dhaqso leh u ogaaneysaa isku xirnaanta iyo qaab dhismeedka jirka iyo qeybta jirka jirku u ciyaarayo waana inuu lahaadaa mustaqbalka . Maaddaama ay sii waddo khibradda, maskaxdu waxay ku baraneysaa casharada ay xanuunnada iyo raaxaysiga adduunku ku bartaan jirkiisa jir, iyo barashada kuwan waxay bilaabayaan inay bartaan inay isu aqoonsadaan inay ka baxsan yihiin jirka. Laakiin maahan ilaa inta ka dambeysa nololo badan iyo cimri dheer in la iskiis isu aqoonsado. Markuu u baranayo casharrada xanuunka iyo farxadda iyo murugada, caafimaadka iyo cudurka, oo uu bilaabo inuu qalbigiisa iska eego, ninku wuxuu ogaanayaa in dunidan, qurux iyo joogtoba u egtahay sida ay u muuqato, inay tahay uun waxa ugu adag uguna adag adduunka badan. kuwaas oo gudaha ah iyo waxa ku saabsan. Markuu karti u leeyahay inuu adeegsado maskaxdiisa, waxaa laga yaabaa inuu garto oo fahmo adduunyada gudaheeda iyo hareeraheeda jidhkan jireed iyo dhulkiisa, xitaa sida uu u arko una fahmo waxyaalaha jir ahaaneed ee uu hadda u maleynayo inuu yaqaan, laakiin dhab ahaantiisuu wax yar u yaqaanaa wax yar. ee.
Waxa jira saddex adduunyo ah oo hareereeya, dhex galaya oo qaadanaya adduunkan jidheed ee ina haysta, kaasoo ah kan ugu hooseeya iyo qaylo-dhaanta saddexdaas. Dunidan jir ahaaneed waxay matalaysaa natiijada muddooyin aad u tiro badan sida lagu tirinaayo fikradaheena waqtiga, waxayna u taagan tahay natiijooyinka ku lug lahaanshaha adduunyada hore ee arrimaha laxiriira dhibaatooyinka kaladuwan ee kaladuwan. Waxyaabaha iyo xoogagga hadda ka shaqeeya dhulkan jireed waa wakiillo ka socda dunnidan hore.
Seddexda adduun ee inaga horeeyey wali waa nala jiraan oo waxay u yaqiinay kuwii hore sidii dab, hawo iyo biyo, laakiin hawada dabka, biyaha, iyo waliba dhulka, maahan kuwa aan u naqaano isticmaalka caadiga ah ee ereyada. Iyagu waa cunsuriyadaha falsafadda ah kuwaas oo lafdhabar u ah arrinta aan ku aqaannay shuruudahaas.
In dunnidan ay sahlan tahay fahamka aan markale soo bandhigi doono Jaantus 30. Waxay matalaysaa afarta adduunyood oo ay tahay inaan kuhadalno, iyagoo kaashanaya iyo dhinacyada koritaanka, waxayna sidoo kale muujineysaa afarta waji ama aasaaska bani’aadamka, mid walbana wuxuu ku dhaqmayaa adduunkiisa, iyo dhamaan howlaha jirka.
♈︎ ♉︎ 戴︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♈︎ ♉︎ 戴︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♎︎
Afarta, adduunka ugu sarreeya iyo kan ugu sarreeya, oo ah shey ka mid ah falkiisa oo ahaa dab, ayaan wali ka sii saarin sayniska casriga ah, sababta loo muujin doono goor dambe. Dunidan hore waxay ahayd adduunyo hal shey oo dab ah, laakiin ku jiray suurtagalnimada wax kasta oo markaa ka dib la muujiyey. Hal shey oo dab ahi ma aha xarunta layaabka leh taas oo u oggolaaneysa marinka wax muuqda inuu galo aan la arki karin, iyo transit oo aan ugu yeernno dab, laakiin ay ahayd, oo ay weli tahay, adduunyo ka sarreeya aragtideena qaab ama walxaha . Astaamihiisu waa neefta waxaana matalaya kansarka calaamadda (♋︎) ee Jaantus 30. Waxay, neefta, kujirtay suuragalnimada waxkasta waana la yaqaanay waxaana la yiraahdaa dab maxaa yeelay dabku waa awooda dhaqdhaqaaqa ee dhamaan jirka. Laakiin dabka aan ka hadlayno ma aha ololka gubanaya ama iftiimiya adduunkeena.
Intii lagu gudajiray, dab, ama adduunyada neefta, ayaa xogteeda gudaha gashay, waxaana loo yeeray jiritaanka nolosha nolosha, oo mataleysa sawirka calaamada leo (♌︎), nolosha, sheyga sixir bararka kaasoo ah hawo. Ka dib waxaa jiray dunida nolosha, oo ah tan ay tahay hawo, ay ku wareegsan yihiin oo ay kor u qaadday dunida neefta, oo ay tahay dab. Nolosha adduunka ayaa laga sheekeeyay, aragtiyahana waxaa horay u mariyey sayniska casriga ah, in kasta oo fikradaha ku saabsan waxa noloshu ku qanacsanayn ay tahay in laga hadlayo. Waxay u egtahay, si kastaba ha noqotee, inay ku saxsan yihiin qaloocyadooda badan. Maandooriyaha, oo ah isku-mid, oo xagga neefsashada ah, ayaa muujinaya laba-cirifoodka nolosha adduunka, iyo muujintaani waa arrin ruuxdu ku jirto. Shayda-ruuxu waa sheyga sixir-bararka hawada adduunka, leo (♌︎); waa taas taas oo ay saynisyahannadu ula macaamileen fikradooda qaaliga ah iyo taas oo ay ugu yeedheen xaaladda birta atomiga. Qeexitaanka sayniska ee atom waxaay ahayd: qaybta ugu yar ee laga fikiro karo taas oo gali karta sameynta molecule ama kaqeyb qaadan falcelin kiimikaad, taasi micnaheedu waa, walxaha shey aan la qeybin karin. Qeexidan waxay ka jawaabi doontaa muujinta walaxda adduunka nolosha (♌︎), oo aan ugu magacdarnay ruux-ruux. Waa, arrin ruux ahaaneed, laf-dhabarta, walxaha aan muuqan, laguma hoos baadhi karo dareenka jidheed, in kasta oo laga yaabo in lagu fahmo fikirka qof garanaya fikirka, sida fikirka (♐︎) uu dhinaca ka soo horjeedo, dhinaca horumarka ee Diyaaradda oo ah nooca ruux ahaaneed, nolosha (♌︎), waa dhinaca aan qasabka ahayn, fikirka nolosha (thought – ♐︎), sida lagu arki doono Jaantus 30. Horumar dambe ee tijaabooyinka sayniska iyo saadaasha, waxaa loo maleynayay in atom uusan ahayn mid la arki karo ka dib, maxaa yeelay waxaa loo qeybin karaa qaybo badan, qeyb kasta oo ka mid ahna dib loo qeybin karo; laakiin waxaas oo dhami waxay cadeynayaan in mawduuca tijaabadooda iyo aragtidoodu aysan ahayn atom, laakiin ay aad uga badan yihiin tan atomka dhabta ah, oo aan la arki karin. Waa arinkan naftiisu halista ah ee Atomic-ka taas oo ah arrinta adduunka nololeed, oo ah sheyga ugu weyn ee dabiiciga ah ee ay u yaqaanaan dadkii hore.
Markii wareegii isqarxintu uu socday, nolosha nolosha, leo (♌︎), ayaa ka sii dartay oo qaylisay walxaha ay ka kooban tahay eexda-atamyada ama atomka, iyo roobabkan iyo qeylo-dhaantaas ayaa hadda looga hadlaa sidii astral. Astralkani waa dunida qaab, oo lagu muujiyey astaanta astaanta (♍︎), qaab. Foomka, ama dunida astral-ka ah waxaa ku jira qaabab aan caadi ahayn, oo ah, kaas oo dunida jireed lagu dhisay. Astaamaha qaab adduunku waa biyo, laakiin maaha biyaha oo ah isku darka laba qaybood oo jireed oo jimicsigu u yaqaanno xubno. Astral-kaan, ama qaab-dhismeedka adduunku, waa adduunyada, oo ay saynisyahannadu ku qaldan yihiin nolosha adduunka ee arrinta sunta. Isaga, adduunka qaab dhismeedka astral, wuxuu ka kooban yahay shey keli-keli umana muuqdo isha, kaasoo u nugul gariiryada jirka oo keliya; waa gudaha, waxayna isku haysaa dhammaan qaababka, jir ahaantooda jir ahaan u noqonayaan.
Ugu dambayntiina waxaan haysannaa adduunkeenna jir ahaaneed ee uu matalayo maktabadda calaamadda (♎︎). Cilmiga falcelinta ee adduunkeenna jir ahaaneed waxaa lagu yaqaaney dadkii hore sidii dhul; ma aha dhulka aannu garanayno, laakiin waa dhulka aan la arki karin ee lagu hayo adduunyada astaan ​​ahaan, oo sababta u ah waxa hadhay ee hadhaaga mowduucyada u muuqda oo u muuqda sidii dhulka la arki karo. Markaa, dhulkeenna muuqda ee muuqda, waxaan haysannaa, marka hore dhulkii asturiga (♎︎), ka dibna qaab astaan ​​(♍︎), ka dibna qaybaha ay ka kooban yihiin, kuwaas oo ah nolosha (♌︎), oo aan ku dhex jiidey labadan, iyo neef (♋︎), kaas oo ah dabka adduunka oo daryeela oo ku hayo wax kasta dhaqdhaqaaq joogto ah.
Adduunkeenna jir ahaaneed waxaa xoogga la saarayaa xoogagga iyo walxaha afarta adduun, waana mudnaanteena inaan u galno aqoonta iyo adeegsiga kuwan haddii aan doono. Isaga laftiisa, dunida jireed waa qolof burburaya, hadh midab ah, haddii la arko ama laga dareemo laftiisa, sida lagu arko ka dib xanuun iyo murugo iyo murugo iyo burburka ayaa dib uga noqday dhadhanka dareenka oo ku qasbay maskaxda inuu arko faaruqinta adduunka. Tani waxay imaaneysaa markii maanku uu baadi goobayay oo uu ka dhammaaday kuwa ka soo horjeedda. Kuwaasi way baxeen, oo wax aan loo qaadan karin, dunidu waxay lumisay midab iyo qurux oo dhan, waxayna noqotay cidla xun oo cidla ah.
Marka maskaxdu ay timaado xaaladdan, halkaas oo midabkoo dhami ka baxo nolosha iyo nolosha lafteeda ayaa umuuqata inay tahay wax aan ujeeddo ahayn oo aan ahayn inay soo saarto murugo, dhimashadu dhakhso ayey u raacdaa haddii ay dhacdo dhacdo taas oo maskaxda dib ugu celin doonta ama toosinaysa xoogaa dareemid naxariis, ama in loo muujiyo ujeedo ahaan sidaas oo silica. Markay taasi dhacdo, noloshu waa laga beddelay sidii caadooyinkeedii hore, oo sida ku xusan iftiinka cusub ee u yimid, wuu tarjumayaa dunida iyo nafteeda. Markaa wixii midab la’aan ahi waxay qaadataa midabyo cusub oo noloshu mar labaad ayey bilaabmaysaa. Wax kasta iyo wax kasta oo dunida ku jira waxay leeyihiin macno ka duwan kan markii hore. Waxaa ka buuxsamay wixii markii horaba u muuqday inay madhan yihiin. Mustaqbalka wuxuu umuuqdaa inuu leeyahay rajo cusub iyo himilooyin cusub oo u horseedaya fikrado iyo ujeedooyin cusub iyo hadafyo sare.
In Jaantus 30, Saddexda adduun waxaa lagu muujiyey raggooda oo taagan kaalinta afraad iyo kan ugu hooseeya, jirka jir ahaaneed, maktabadda calaamadda (♎︎). Ninka jidh ahaaneed ee maktabadda, jinsi ahaan, wuxuu ku xaddidan yahay adduunka 'gogo' scorpio (♍︎ – ♏︎), nooc-rabitaan. Marka maskaxdu uur yeelato oo kaliya jirka jir ahaaneed iyo dareemaheeda, waxay isku dayeysaa inay qandaraas ku siiso dhamaanba adduunyada raggooda kaladuwan jirka jirkiisa wuuna ku dhaqmaa dareenkiisa, kuwaas oo ah wadooyinkaas jirkiisa u horseeda jirka adduunka; sidaas darteed waxay la xidhiidhaa awooddeeda oo dhan iyo suurtagalnimada adduunyada jidhka oo keli ah, oo sidaasaan uga iftiimaa iftiinka dunida sare. Dabeecadda jidh ahaaneed ee dadku, sidaa darteed, ma uuraysan doono, ama ma dhalan doono, wax ka sarreeya nolosha jidh ahaaneed ee adduunkan jireed. Waa in maskaxda lagu hayaa in aan soo gaarnay muddadii ugu hooseysay ee galitaanka adduunyada jireed iyo jirka ee galmadu, maktabad (♎︎), asal ahaan ka timid neefta, ama dabka dabka, oo uuraysan kansarka calaamadaha (♋︎), Neefsashada, isqurxinta iyo dhisidda calaamadaha leo (♌︎), nolosha, u horseeday kuna qaabeeysan yahay astaanta astaanta (♍︎), foomka, iyo ku dhashay maktabadda calaamadda (♎︎), galmo.
Dunida dabka kulul ee neefta waa bilowga horumarka maskaxda ee zodiac buuxa; waa bilowga ku luglahaanshaha maskaxda maanka ee qofka ugu sarreeya, ninka ruuxiga ah, oo ka bilaabay zodiac ee ninka ruuxiga ah aries (♈︎), wuxuu ku soo degay taurus (♉︎) iyo gemini (♊︎) kansarka calaamadaha ( ♋︎), ee zodiac ruuxiga ah, oo saaran diyaaradda calaamada leo (♌︎) ee zodiac buuxda. Calaamaddaan leo (♌︎), nolosha, ee zodiac waara waa kansarka (♋︎), neefta, ee zodiac ruuxiga ah, waana bilowga kaqeybgalka aasaaska maskaxda; Tani waxay ka bilaabmaysaa calaamadaha astaamaha (♈︎), ee zodiac maskaxda, waxay ku lug leedahay iyada oo loo marayo kansarka (cancer) kansarka maskaxda, taas oo ah nolosha, leo (♌︎), ee zodiac ruuxiga ah, ka dibna hoos ugu sii socota sign leo (♌︎), of zodiac maskaxda, oo saaran diyaaradda budgo (♍︎), qaab, zodiac gebi ahaanba, diyaaradda kansarka (♋︎), kansarka naasaha, iyo xadka jiidashada jiirka. sida lagu muujiyey calaamadaha aries (♈︎), ee jirka jirka iyo zodiackiisa.
Waayadan fog fog ee taariikhda bini-aadamka, maanka ninku wuxuu galay jidh bini aadamka, diyaarna u ahaa inuu helo; wali waxaa lagu gartaa calaamad la mid ah, marxalad, heerka koritaanka iyo dhalashada, si ay usii ahaato mid dib ugula noolaata da'deena. Waqtigan xaadirka ah way adag tahay in la raaco dhibaatooyinka ka dhex jira ninka jirka ah, laakiin sii wadida fikirka afarta nin iyo soodiyadooda zodiac ee saxda ah, sida lagu muujiyey Jaantus 30, waxay daaha ka qaadi doontaa run badan oo runta lagu muujiyey jaantuskan.
Kacaanka maskaxda maskaxda ee jirka iyo jirka hada kahor ku lug lahaa jirkiisa jireed, wuxuu kasoo bilaawday jirka, sida lagu muujiyay maktabadda (♎︎), galmada, jirka. Kala-sarreynta ayaa ka soo baxeysa, marka hore iyada oo loo marayo damac, sida lagu muujiyey calaamadaha scorpio (,), rabitaan, ee zodiac dhammaystiran. Waxaa la arki doonaa in calaamadaan loo yaqaan 'scorpio (♏︎) ee zodiac-ka saxda ah, uu yahay dhameystirka dhanka geeska calaamadda (♍︎), qaab. Diyaaraddaan, virgo-scorpio (♍︎ – ♏︎), oo ah zodiac sax ah, waxay dhex mareysaa diyaaradda fikirka nolosha, leo-sagittary (♌︎ – ♐︎), oo ah nooca loo yaqaan 'zodiac maskaxda', oo ah kansarka loo yaqaan 'cancer-capricorn, neefsashada' shaqsi ahaaneed (♋︎ – ♑︎), ee cilmiga maskaxda, kaasoo ah xadka iyo xadka ninka jirka iyo zodiackiisa. Sidaa darteed waa suurtogal, iyada oo ay ugu wacan tahay ku-lug-lahaanshaha jirka jir ahaaneed ee xubnaha u dhigma, canaasiirta iyo xooggooda adduunyada kala duwan, in ninka jirka ahi uu isuraysto inuu yahay jir jidh ahaaneed; Sababta uu u malayn karo una malayn karo naftiisa inuu yahay jir jireed oo feker ah ayaa sabab u ah xaqiiqda ah in madaxiisa taabto diyaaradda leo-sagittary (♌︎ – ♐︎), fikirka nolosha, maskaxda, iyo waliba diyaaradda kansarka loo yaqaan 'cancer-capricorn' (♋︎ – ♑︎), shaqsi ahaaneed neefsashada, oo ah astaamaha cudurka maskaxda; laakiin waxaas oo dhami waxay ku xaddidan yihiin diyaaradda nooca-rabitaanka ah, virgo-scorpio (♍︎ – ♏︎), ee kaamil ah. Iyada oo ku saleysan kartidiisa maskaxeed, ninka jirka ahi waa awoodaa, sidaa darteed, inuu ku noolaado calaamadda scorpio (♏︎), rabitaanka iyo garashada adduunka iyo qaababka adduunka, diyaaradda bud-dhigga (♍︎), qaab, laakiin inta uu ku nool yahay tan Saxeexo oo xaddido naftiisa fikirkiisa diyaaradda leo-sagittary (♌︎ – ♐︎), adduunkiisa maskaxeed, ama zodiac, ma garan karo wax aan ka badnayn qaab dhismeedka jirka iyo nolosha iyo fikirka adduunkiisa maskaxeed ee uu metelay neefta iyo shaqsiyaddiisa maskaxiyan, iyada oo loo marayo jirkiisa jir ee maktabadda (♎︎). Ninkanu waa xayawaankii aannu ka hadalnay.
Haddaba, marka ninka xayawaanka ahi si adag ugu sugan yahay, ama uu ku sugan yahay xaalad hore, ama nolol ilbaxnimo, uu bilaabo inuu la yaaban yahay waxa qarsoodiga ah ee nolosha iyo inuu ka maleego sababaha suurtagalka ah ee ifafaaleyaasha uu arko, wuxuu ku qarxay duqeymaha jirkiisa zodiac iyo adduun wuxuuna maskaxdiisa ka dheereeyay jireed ilaa dunida maskaxda; markaa horumarka maskaxdiisa ninku wuxuu bilaabmayaa. Tan waxaa lagu muujiyey astaanteenna. Waxaa lagu calaamadeeyay aries (♈︎) nin jirkiisa ku jira zodiac, kaas oo saaran diyaaradda kansarka-capricorn (♋︎ – ♑︎) ee maskaxda, iyo leo-sagittary (♌︎ – ♐︎), fikirka nolosha, ee ninka maskaxda. Isaga oo ka imanaya calaamadda 'capricorn' (♑︎), oo ah xadka qofka jidh ahaaneed, wuxuu kacaa kor ugu kacsan yahay aagga zodiac ee adduunku wuxuu u gudbaa marxaladaha iyo astaamaha aquarius (♒︎), nafsadda, pisis (♓︎), ayaa, aries (♈︎), miyir, qofka maskaxda, kaas oo saaran diyaaradda kansarka-ric-♑︎), neefsashada-shaqsiyeed, ee maskaxda iyo nin-sagittary (♌︎ – ♐︎), fikirka nolosha, of zodiac ruuxiga ah. Ninka maskaxdu wuu ku koran karaa, sidaa darteed, gudaha iyo jirka jidh ahaaneed oo waxaa laga yaabaa inuu fikirkiisa iyo ficilkiisa u diyaariyo maaddada oo uu dejiyo qorshayaasha horumarkiisa, kaasoo ka bilaabma astaamaha (♑︎) astaamaha maskaxda wuxuuna kordhiyaa kor ilaa calaamadaha aquarius, nafta, pisis, doonis, (a ♈︎), ee maskaxda iyo zodiac. Isagu wuxuu hadda ku jiraa kansarka loo yaqaan 'cancer-capricorn' (♋︎ – ♑︎), shaqsi ahaaneed-neefsi, ee zodiac ruuxiga ah, kaas oo sidoo kale diyaaradda leo-sagittary (♌︎ – ♐︎), fikirka nolosha, ee zodiac buuxda.
Waa suurta gal mid, markii uu maskaxdiisa ku soo koray xagga maskaxda, inuu maskax ahaan u arko nolosha iyo fikirka adduunka. Tani waa xadka iyo xudduudka ninka sayniska. Waxa laga yaabaa inuu kor ugu kaco horumarkiisa aqooneed ee diyaaradda fikirka adduunka, taas oo ah shakhsiyadda qofka maskaxda wax ka qaba, isla markaana ka faalloodaa neefta iyo nolosha isla diyaaradda. Haddii, si kastaba ha noqotee, ninka maskaxdu waa inuusan ku xaddirin nafsadiisa fikirkiisa qulqulaha maskaxda, laakiin wuxuu isku dayaa inuu ka sarreeyo, wuxuu ku bilaaban doonaa xadka diyaaradda oo wuxuu ka saxeexnaa kan uu ka shaqeynayo, kaas oo ah aftahannimada (cap ) oo ah zodiackiisa ruuxiga ah, oo kor u kaca astaamaha aquarius (♒︎), nafta, pisces (♓︎), doonistiisa, aries (♈︎), miyir, taas oo ah horumarka buuxa ee ninka ruuxiga ah ee zodiackiisa ruuxiga ah, kaasoo fidiya iyo waxaa lagu xiraa kansarka loo yaqaan 'cancer-capricorn' (♋︎ – ♑︎) shaqsi-neefsi, ee zodiac gebi ahaanba. Tani waa dhererka gaaritaanka iyo koritaanka maskaxda maskaxda jirka. Markii tan la gaaro, geerida shaqsiyadeed waa xaqiiqo jirta oo dhab ah; mar dambe, xaalad kasta ama xaalad kasta, maanka, qofkii sidaas gaadhay, weligiis ma joogsan doono inuu si joogto ah miyir u yeesho.
Qoraalkii ugu dambeeyay ee 'Hurdada,' ereyada "muruqyada aan qasabka ahayn iyo dareemayaasha" ayaa si aan toos ahayn loo adeegsaday. Muruqyada la shaqeeyay xilliyada soo jeed iyo hurdada waa isku mid, laakiin inta lagu gudajiro hurdada waxyaabaha saamaxaya dhaqdhaqaaqa jirka ayaa ugu horeyn sabab u ah nidaamka neerfaha ee dareenka leh, halka xaalada soo jeedinta dareenka waxaa kaliya lagu fuliyaa habka habka dareemayaasha maskaxda. . Fikradani waxay si fiican u socotaa guud ahaan tifaftirka “Hurdada.”